Mate Xs mpịachi mpịachi apịachila mpempe ego nde | Gam akporosis
Ubi ebe ọ na-enweghị onye ma ọ bụ mmadụ ole na ole zọkwasịrị ụkwụ na-esikarị ike ịmalite na mbụ. Huawei na Samsung maara nke a nke ọma site na iji mpịachi ekwentị ha, nke bụ ndị mbụ ewepụtara, yana ha dị oke ọnụ. Otú ọ dị, n'ikuku ndị a, nke bịara dị ka Mate X y Galaxy n'ogige atụrụ, n'otu n'otu, ọ dị mma nke ọma, n'agbanyeghị nkatọ dị iche iche na ihe ndị ọzọ.
Otú ọ dị, Huawei's Mate Xs, nke nọchiri Mate X, emebeghị nke ọma na ire ere, nke a bụ ihe gosipụtara na nkwupụta gọọmentị ọhụrụ nke ndị nrụpụta China mere.
Dị ka Huawei si kpughee n'oge na-adịbeghị anya, ọ furu efu n'etiti $ 60 na $ 70 na Mate Xs. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi ihe nnabata dị iche iche, mana nke isi nwere ike ịbụ mkpado ọnụ ahịa ejiri ya, nke dị ihe dị ka euro 2,500.
Agbanyeghi na onu ogugu a gha achoputa oke ahia nke ndi China, o yiri ka nke a abughi ihe ndi Huawei tụrụ anya ya, ebe otutu ihe kariri nde dollar 60 na-egosi na ọnwere ihe na-ezighi ezi na ngụkọta oge.
Yu Chengdong, onye isi oche nke ndị ahịa BG na Huawei Technologies, kesara na ebe ọ bụ na mbido Mate Xs, nke mere na February, Ọnụ ego nke imepụta na ibupu ụdị a abawanyela. Nke a ga - abụ ihe kpatara ụdị uhie dị otú ahụ.
Enweta uru nke Mate Xs, na-enweghị mgbagwoju anya, enwere obi abụọ. Otú ọ dị, Huawei ga-aga n'ihu ịkụ nzọ na smartphone a na-atụgharị agbanwe na nke a na-anọchi anya onye ga-anọchi ya nke na-enweta ihe ịga nke ọma ma kwụọ ụgwọ maka ugbu a. N'agbanyeghi ihe ekwuru, ekwesighi ka ekwenye na uzo nke nsogbu Mate Xs gbanwere ma bido nweputa uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mate Xs mpịachi ama ama kpatara ọnwụ nke nde dollar 60, ka Huawei kwuru